Nye ndị na-enweghị akwụkwọ ndọta na-enweghị akwụkwọ, ọ nweghị onye na-acha ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndo si China rụpụtara
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Igwe anaghị acha ọcha,Onweghi onye na-acha uhie uhie,Ọ dịghị onye na-esote Kit,Ihe ndozi eji achọ mma,Mgbidi Ejiri Nrọ,
Home > Ngwaahịa > Igwe eji magnetik anabata ihe > Onweghi onye na-acha uhie uhie
Ngwaahịa nke Onweghi onye na-acha uhie uhie , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Igwe anaghị acha ọcha , Onweghi onye na-acha uhie uhie suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọ dịghị onye na-esote Kit R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
1800 * 1200mm Black School Dry Delete Chalkboard
2400 * 1200mm Standard Size Classroom Chalkboard Blackboard
1200 * 900mm Kọfị Ịzụ Blackboard Kere maka Ụlọ oriri na ọṅụṅụ
1500 * Egwuregwu Decoration Blackboard nke 900mm
1200 * 600mm Mpempe akwụkwọ Blackboard
600 * 600mm Dimension obere Black Nkọ ederede Board
Nchịkọta Black Dry Deleted Board Decal Board
Klaasị Green Metal Rolling Chalkboard
Nkpukpo Nkpukpo Nkpukpo Ekpochapu Na Nzuzo
Nnukwu Achịcha Ncha Akpụcha Akpụcha
Achịcha Nchịkọta Na-acha Nkpọrọgwụ Na-ahụ Maka Ụlọ
120 x 180 cm 6x4 Magnetics Receptive Whiteboard
240 * 120cm Cheap Portable Rolling Whiteboard
150 * 90cm Erasable Wipe White Board Steel Sheet
120 * 90cm Na-enweghị Ogwe PET Akwụkwọ Whiteboard
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ metal maka Wall
Nkwakọ ngwaahịa: 6pcs na katọn
1800 * 1200mm Black School Dry Delete Chalkboard Ngwaahịa a bụ 1800mm * 1200mm Ọ dịghị onye ntinye aka na ntanetị nke Whiteboard. Ọ dịghị onye na-adụkọta Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro , nke a na- ehichapụ, na-ehicha, nke gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nke nwere ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Na-eburu ebe dị mfe ma na-...
2400 * 1200mm Standard Size Classroom Chalkboard Blackboard Ọdịdị ngwaahịa a bụ 2400mm * 1200mm Ọ dịghị onye ntinye aka na ntanetị nke Whiteboard. Ọ dịghị onye na-adụkọta Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro , nke a na- ehichapụ, na-ehicha, nke gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nke nwere ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Na-eburu...
Nkwakọ ngwaahịa: 8PCS / Kaadị
1200 * 900mm Kọfị Ịzụ Blackboard Kere maka Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Ngwaahịa a bụ 1200mm * 600mm Ọ dịghị onye ntinye aka na ntanetị. Ọ dịghị onye na-ekpuchi Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro . Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, mechie ya, ma ọ bụ nwere ike tinye ya n'ime ihe ọ bụla. Dị...
1500 * Egwuregwu Decoration Blackboard nke 900mm Nke a ngwaahịa size bụ 1500mm * 900mm Ọ dịghị onye nrapado Magnetik ọkọbọde Whiteboard. Ọ dịghị onye na-adụkọta Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro , nke a na- ehichapụ, na-ehicha, nke gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nke nwere ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Na-eburu ebe dị mfe...
1200 * 600mm Mpempe akwụkwọ Blackboard Ngwaahịa a bụ 1200mm * 600mm Ọ dịghị onye ntinye aka na ntanetị. Ọ dịghị onye na-ekpuchi Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro . Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, mechie ya, ma ọ bụ nwere ike tinye ya n'ime ihe ọ bụla. Dị ka ihe nkwụnye, ọ nwere...
Nkwakọ ngwaahịa: 12PCS / Kaadị
600 * 600mm Dimension obere Black Nkọ ederede Board Ọ dịghị onye na-ekpuchi Whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro . Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, mechie ya, ma ọ bụ nwere ike ịmịnye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla. Ngwaahịa a bụ 900mm * 600mm. Dị ka ihe nkwụnye, ọ nwere...
Nchịkọta Black Dry Deleted Board Decal Board Nkebi No.BCKP-NS50 Ọ dịghị onye na-edozi Whiteboard bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọcha , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo ide ederede ma kwụsị. Na-ejikọta...
Nchịkọta Black Dry Deleted Board Decal Board Nkebi No.GCKP-NS50 Ọ dịghị onye na-edozi Whiteboard bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọcha , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo oge ederede ma kwụsị. Na-ejikọta...
Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ na-enweghị ihe mgbochi Nkebi NoYN3701-4-NS50 Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere...
Nkpukpo Nkpukpo Nkpukpo Ekpochapu Na Nzuzo Nkebi No.NN1390-2-NS50 Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo oge...
Nnukwu Achịcha Ncha Akpụcha Akpụcha Item No.BA6600-1-NS50 Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo oge ederede...
Achịcha Nchịkọta Na-acha Nkpọrọgwụ Na-ahụ Maka Ụlọ Item No.RC0401-4-NS50 Ọ dịghị onye nrapado Whiteboard bụ ụdị mgbanwe whiteboard enweghị nyagide, mfe ịkpụ, kpebisiri, gbagọrọ, coiled, ma ọ bụ nwere ike machined n'ime ihe fọrọ nke nta ọ bụla udi. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo...
120 x 180 cm 6x4 Magnetics Receptive Whiteboard Ngwaahịa a bụ 1800 mm * 1200 mm GRWT-NS50 Ọ dịghị onye ọ bụla onye na -ekpuchi Magnetik anabatara Whiteboard. Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye...
240 * 120 cm Nnukwu Ndagharị Rolling Whiteboard Ngwaahịa a bụ 2400 mm * 1200 mm GRWT-NS50 Ọ dịghị onye ntinye aka na ntanetị . Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa...
Nkwakọ ngwaahịa: 8pcs na katọn
150 * 90cm Erasable Wipe White Board Steel Sheet Ngwaahịa a bụ 1500mm * 900mm GRWT-NS50 Ọ dịghị onye ọ bụla onye na -adọrọ adọrọ na Magnetik Whiteboard. Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya...
120 * 90cm Na-enweghị Ogwe PET Akwụkwọ Whiteboard Ngwaahịa a bụ 1200mm * 900mm GRWT-NS50 Ọ dịghị onye ọ bụla onye na -adọrọ adọrọ na Magnetik Whiteboard. Enweghị ihe ọ bụla Adhesive Whiteboard bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe na-enweghị nrapado , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya...
Igwe ihe ntanetị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ehichapụ Nkebi No.MRWT-NS50 Ọ dịghị onye na-edozi Whiteboard bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọcha , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo oge ederede ma kwụsị....
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ metal maka Wall Nkebi No.GRWT-NS50 Ọ dịghị onye na-edozi Whiteboard bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọcha , dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo oge ederede ma kwụsị. Na-ejikọta...
China Onweghi onye na-acha uhie uhie Ngwa
Onweghi ihe eji eme ogugu eji eme ya bu nke PET na igwe oyuchara achoghi emebi, mgbochi-udu. O nwere ikike ige nti ndọta. Onweghi ihe na-acha ogwe ọcha a ga-agbanwe na / ma ọ bụ dochie ya mgbe etinyere ya na mgbidi nwere ogwe ihe ndọta, dị ka akụrụngwa ndọta anyị.
Igwe anaghị acha ọcha
Ọ dịghị onye na-esote Kit
Ihe ndozi eji achọ mma
Mgbidi Ejiri Nrọ
Onye na-acha ọcha
Enweghị ogwe ọcha
Igwe anaghị acha ọcha Onweghi onye na-acha uhie uhie Ọ dịghị onye na-esote Kit Ihe ndozi eji achọ mma Mgbidi Ejiri Nrọ Onye na-acha ọcha Enweghị ogwe ọcha